‘अब राप्रपाभित्र गुटको राजनीति चल्दैन, थापाको अभिव्यक्ति टिप्पणी लायक छैन’ « Sansar News
‘अब राप्रपाभित्र गुटको राजनीति चल्दैन, थापाको अभिव्यक्ति टिप्पणी लायक छैन’
२४ मंसिर २०७८, शुक्रबार १२:३८
पार्टी नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेनको आगमनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा केही प्रश्नहरु उठेका छन् । राप्रपाको राजनीतिक इतिहासमै भएको यो क्रमभंगताले आगामी समय राप्रपा र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता डोर्‍याउला, सबैलाई जिज्ञासा छ । राप्रपमा नयाँ नेतृत्वका रुपमा उदाएका लिङ्देनसँग संसार न्यूज डटकमकी संवाददाता टिका कुरुम्वाङले राप्रपाभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिबारे केही जिज्ञासा राखेकी छिन् । अध्यक्ष लिङ्देनसँग कुरुङवाङले गरेको संवादको सम्पादित रुप ।
पार्टीभित्र र बाहिर तपाईँको आगमनले केही भिन्न सन्देश दिएको छ । विशेषगरी युवा पंक्तिमा उत्साह पनि देखिन्छ । तपाईँले चाहिँ नेतृत्वमा आउनुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
खासगरी हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाएको आफु नेतृत्वमा पुगौँ अथवा अन्य नेताहरुले यसभन्दा अगाडीको अध्यक्षहरुले प्राप्त गर्नु भएको सुविधा अथवा मानसम्मान प्राप्त गरौँ भन्ने मनसायबाट होइन । युवाहरुको ठुलो पंक्ति जसले परिवर्तन खोजिरहेको छ, नेपालको राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व खोजिराखेको छ, उहाँहरुमा समेत नयाँ सञ्चार गर्न सकियोस् र उहाँहरु सबैको सुभेच्छा, सद्भाव मात्र होइन सक्रिय सहभागिता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा ल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो । हामीले त्यसको प्रस्थान विन्दुको रुपमा नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमै पुगेर यो नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठायौँ । नेतृत्व परिवर्तन पनि भएको छ । र यसले स्वभाविक रुपमै युवा पुस्ता मात्र होइन परिवर्तनको पक्षमा रहेको आम जनसमुदायमा नयाँ आकर्षण पैदा गराएको छ ।
आजसम्म राप्रपाका कार्यकर्ताहरु कुनै अमुक समूहका कार्यकर्ताका मात्रै थिए । म फलानो समूहको, म फलानाको भन्ने मात्रै थियो । यो महाधिवेशनसँगै अब सबै कार्यकर्ता पार्टीका कार्यकर्ता बनेका छन् । अब कसैले राप्रपाभित्र गुट बनाउने वा विभाजन ल्याउने अवस्था छैन । म विभाजनको कल्पना गर्दिन ।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै राप्रपाप्रति मानिसहरुले नयाँ आशाको दृष्टिकोणले हेर्न थालेका छन् । यसलाई शक्तिमा परिणत गरेर आगामी दिनमा राप्रपालाई एउटा बलियो शक्ति मात्र होइन नेपालको राजनीतिको केन्द्रको रुपमा विकास गरेर लैजान्छौ । र त्यसमा हामी विस्वस्त पनि छौँ ।
नेतृत्वमा आउँदै गर्दा मुख्य कुरा त्यसको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्ने भन्ने हुन्छ । राप्रपाले लिएको मान्यतालाई कसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने सोंच्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुलतः राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र, संघीयता खारेजीलगायतका मुद्दालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको छ । ति सँगसँगै भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने, जनजिविकाका सवाल, रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु पनि छन् । यी सबैको प्राप्तीका लागि त पहिलो कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्‍यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो र ठुलो बनाउनका लागि राप्रपासँग समान विचार राख्ने व्यक्ति, समूह, संस्था, संगठन र पार्टी र अन्य धार्मिक क्षेत्रलाई समेत समेटेर एकीकृत शक्ति निर्माण गर्नु पर्‍यो । त्यसको लागि हिजो हामीले पहिलो बैठकबाटै एउटा शिलशिलाको प्रारम्भ गरेका छौँ र आगामी दिनमा एउटा बृहत शक्ति निर्माण गरेर हामी अगाडी बढ्छौँ र यो मान्यता स्थापित गर्ने बाटोमा हामी अगाडी बढ्छौँ ।
राप्रपाको इतिहास एकताभन्दा बढी फुट र विभाजनको छ । फुट र विभाजनको अनुभवलाई हेर्दा एकता बनाइरहन कति सहज देख्नुहुन्छ ?
हामीले नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठाएको कारण, फेरि राप्रपालाई यसअघि जस्तै बलियो पार्टी बनाउन सकियोस् भनेर हो । आम नागरिकलाई राप्रपाप्रति आर्कषित बनाउन आवश्यक छ, जुन नयाँ नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव छ । सँगसँगै अर्को पक्ष चाहिँ लामो फुट र विभाजनको अनुभवबाट आएको राप्रपामा एकताको लागि पनि नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य थियो । आजसम्म राप्रपाका कार्यकर्ताहरु कुनै अमुक समूहका कार्यकर्ताका मात्रै थिए । म फलानो समूहको, म फलानाको भन्ने मात्रै थियो । यो महाधिवेशनसँगै अब सबै कार्यकर्ता पार्टीका कार्यकर्ता बनेका छन् । अब कसैले राप्रपाभित्र गुट बनाउने वा विभाजन ल्याउने अवस्था छैन । म विभाजनको कल्पना गर्दिन ।
तथापी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सबैको साझा बनाएर लैजान, प्रभावकारी रुपमा चुस्त दुरुस्त बनाएर लैजान थुप्रै चुनौति भने कायमै छन् । सबैको विश्वास जितेर जाने चुनौतीहरु कायमै छन् । जसलाई नयाँ नेतृत्वले मिलाउँदै लैजान्छ ।
पार्टी अध्यक्षमा पराजय भएसँगै निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाका विषयमा केही फरक कुराहरु बाहिर ल्याउनुभएको छ । जुन विषयमा धेरै बहसहरु पनि भइरहेका छन् । पूर्वराजासँग जोडेर उहाँले चलाएको बहसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म यस विषयमा खासै टिप्पणी गर्न चाहन्न । कहिले काहीँ निर्वाचनमा पराजय पछि स्वभाविक रुपमा यस प्रकारको प्रतिक्रियाहरु आउँछन् । अब त्यस्तो नआएको भए हुन्थ्यो मात्रै भन्छु । धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । उहाँ उठाएको ति विषयमा राप्रपामा छलफल हुन सक्दैन ।
पहिलो बैठकमै उहाँको अनुपस्थितिलाई केही सन्देशका रुपमा पनि लिन मिल्ला । पदाधिकारी समूहमा तपाईँको कमजोर उपस्थितिलाई पनि उहाँले इंगित गर्न खोज्नुभएको त होइन् ?
त्यस्तो केही पनि छैन । बैठकमा तीन जना निवर्तमान अध्यक्ष मध्ये दुई जनाको उपस्थिति भएको छ । उहाँ सोझै प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको थियो । प्रतिस्पर्धामा सहभागि भएको हुनाले केही दिन आफुलाई असहज मान्नु भएको होला । विस्तारै यो सब चिज ठिक भएर जान्छ । उहाँ बैठकमा सहभागि नभएको विषयलाई त्यति ध्यान दिन आवश्यक छैन् । किनभने बैठकमा कुनै त्यस्तो महत्वपूर्णं मुद्दामा हामी छलफल गरेका थिएनौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक पर्ने, नीतिगत रुपमा फरक पर्ने कुनै विषयहरु बैठकमा थिएनन् । आउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर, नआउदा पनि फरक पर्ने खालको विषयहरु थिएन । र मलाई लाग्छ क्रमशः फेरि अन्य बैठकहरुमा उहाँको उपस्थिति हुँदै जानेछ ।
तपाईँले उठाएको अर्को कुरा, निर्वाचनमा कसको प्यानलले कति संख्या जित्यो भन्ने विषय भृकुटीमण्डपमै सकिएको थियो । को कताबाट आएको भन्ने विषय अब रहन्न । हामी नेतृत्वमा आएसँगै सामूहिक रुपमा एजेण्डाहरु लिएर आएका छौँ । त्यस कारणले यो खोतल्ने कुरै छैन । त्यो गर्नु भनेको सप्तकोशीमा अनि कोशीपुलमा बसेर अरुण तमोरको पानी कोट्याए जस्तो हुन्छ । अब त्यो भेटिदैँन अब त्यो सकियो ।
अब राप्रपामा यो पक्ष वा त्यो पक्ष भन्ने छैन । मैले अघि नै भनि सके, आवश्यकता, प्राथमिकता र योग्यताको आधारमा कसलाई कुन जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गरिन्छ । सबैलाई सम्मान गरेर कसैलाई पाखा वा काखा भन्ने अब रहन्न । हामी सबैको उद्देश्य राप्रपालाई देशकै पहिलो शक्ति बनाउने हो । हामीले बोकेका एजेण्डालाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने हो ।
अन्तिममा, नेतृत्वमा आइसके पछि सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारी पनि हो । नेतृत्वकर्ताको हिसाबले यसलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ? नेता तथा कार्यकतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?
अब राप्रपामा यो पक्ष वा त्यो पक्ष भन्ने छैन । मैले अघि नै भनि सके, आवश्यकता, प्राथमिकता र योग्यताको आधारमा कसलाई कुन जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गरिन्छ । सबैलाई सम्मान गरेर कसैलाई पाखा वा काखा भन्ने अब रहन्न । हामी सबैको उद्देश्य राप्रपालाई देशकै पहिलो शक्ति बनाउने हो । हामीले बोकेका एजेण्डालाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने हो । देशलाई मौलिक ढंगले समृद्ध बनाउने हो । जसको लागि राप्रपा एकताबद्ध र एकजुट हुन आवश्यक छ । त्यसको विकल्प छैन ।
पुरा संवाद हेर्नुहाेस् भिडियाेमा